mairie-antananarivo – Boriborintany faha 6 (CUA): Nanao fanadiovana faobe entina miady amin’ny aretina pesta
administrateur 21 septambra 2018 Commentaires fermés
Araka ny toromariky ny ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana, amin’ny tokony hampadio ny Tanàna hatrany, amin’ny maha soa iombonan’ny Malagasy azy dia niara-nientana nanao fanadiovana faobe teny amin’ny boriborintany faha- 6 ny ekipan’ny kaominina Antananarivo rehetra, notarihin’ny sekretera jeneraly Heriniaina Razafimahefa, ny delegen’ny boriborintany faha 6, Fehizoro Andriamananjezika, niampy ireo tale isan-tsokajiny ao amin’ny CUA izay niara-niasa tamin’ny fanatontosàna ny asa fanadiovana, androany maraina.
Niaraka tamin’ny kaominina tamin’izany ny fokonolona nanerana ny fokontany 32 ary ny RF2 ao amin’ity boriborintany ity, izay miisa 650. Nozaraina faritra 6 ny fokontany miisa 32 voakasiky ny fanadiovana : Ankazomanga , Anosivavaka , Antanety Atsimo parking ao amin’ny biraon’ny boriborintany faha 6, Andranomena , Ambohimanandray ary ny tsenan’Ambohimanarina. Araka ny fanambaràn’ny delegen’ny boriborintany faha 6, Fehizoro Andriamananjezika dia natao ny fadiovana faobe izao mba hisorohana ny mety ho fiavian’ny aretina, indrindra ny pesta ary mba ho tombontsoa ho an’ny rehetra.
Tsy ny lalampirenena ihany hoy izy no nodiovina teto fa ireo lalan’ny kaominina ihany koa, ankoatra izay, teo ny fanesorana ny loto manentsina ny lakandrano. Eto izahay dia miantso ny tompon’andraikitra manala ny fako na ny manana andraikitra manandrify izany hoy hatrany ny delege Fehizoro Andriamananjezika, mba hanao ny asany hibata ny fako ho tombontsoan’ny mponina eto amin’ny tanànan’Antananarivo. Manentana ny mponina ihany koa mba hitandro mandrakariva ny fahadiovana, satria izay tsy mandoto dia efa naman’ny manadio ihany.